जानी राखौं महिनाबारी पछि कुन दिनको यौन सम्पर्क सुरक्षित हुन्छ ? – Khabar Art Nepal
जानी राखौं महिनाबारी पछि कुन दिनको यौन सम्पर्क सुरक्षित हुन्छ ?
By खबर आर्ट नेपाल	 On ३० चैत्र २०७५, शनिबार १७:५९
चैत्र ३०खबर आर्टनेपाल। महिनावारी हुनु अघि र भएपछिका केही निश्चित दिनमा यौन सम्पर्क गर्नाले गर्भ रहँदैन भन्ने पुरानो मान्यता रहेको छ । जसलाई अहिलेका आधुनिक अनुसन्धानले समेत पुष्टि गरेको छ ।
विज्ञहरुले परिवार नियोजनको एउटा विकल्प अर्थात ‘सेफ सेक्स पिरियड’ भनेर मानेका पनि छन् ।आज हामीले त्यहि कुरामा चर्चा गर्दैछौँ, कुन दिनको सेक्स सबैभन्दा सुरक्षीत हुन्छ त ?
महिनावारी भएको पहिलो सात दिन महिनावारी भएको पहिलो सात दिन सुरक्षीत पिरियड हो तर यो बेला महिला शारीरिक र मानसिक रुपले पनि यौनसम्पर्क गर्नु राम्रो मानिदैन् । त्यसैले यो बेलामा यौनसम्पर्क नगरेको राम्रो ।
त्यस्तै महिनावारी पछि आठौँ, नवौँ र दशौँ दिन यी दिनमा साधनविना गरिने सेक्स तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित मानिन्छ । अनुसन्धानकर्ताहरुले यी दिनमा गरिने यौनसम्पर्कका बेला गर्भरहने सम्भावना कम अर्थात ४० देखि ६० प्रतिशत मात्रै रहने बताउने गरेका छन् । महिनावारी भएको ११ देखि १६ दिनमा गर्भरहने सम्भावना धेरै हुन्छ साधनविना गरिने यो बेलाको यौनसम्पर्कले गर्भरहने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ ।
विज्ञहरुले डिम्व बाहिर आएर बस्ने भएकोले यो बेलामा हुने साधनबिनाको यौनसम्पर्कले गर्भरहने सम्भावना ८० प्रतिशत सम्म रहने बताउछन् । १७ देखि १९ दिनमा साधनविना गरिने यौनसम्पर्कमा गर्भरहने सम्भावना कम त रहन्छ तर ढुक्कै चाहि हुँदैन ।
विज्ञहरुले यसबेला पनि गर्भरहने सम्भावना ४० देखि ६० प्रतिशत रहने बताउछन् । २० देखी महिनावारी नहुँदासम्मको दिन यसबेला साधनविना गरिने यौनसम्पर्कले अरु बेलाको तुलनामा सबैभन्दा सुरक्षित मानिन्छ । अर्थात विज्ञहरुले यतिवेला साधनविना गरिने यौनसम्पर्कले गर्भरहने सम्भावना सून्य देखि ५ प्रतिशत मात्रै रहन्छ ।
नोट: विभिन्न अनुसन्धानले सुरक्षित र असुरक्षित समय र दिन तोके पनि सबैमा यो लागू हुन्छ भन्ने छैन् । सून्य देखि ५ प्रतिशत सम्भावना जहिले पनि रहन्छ । त्यसैले परिवार नियोजनको भरपर्दो साधन अपनाउनु सबैभन्दा भरपर्दो हुन्छ । एजेन्सी
धरान सेउती पुल दुर्घटना, घटनास्थलमै ३ जानकाे मृत्यू
’बैशाख’१ गते’ मात्रै फूल्ने यो फूलको यस्तो छ रहस्य ? जानी राखाैं